Soomaaligii ugu horeeyey oo wasiirka socdaalka ka noqday dalka Kanada | Somaliska
Soomaaligii ugu horeeyey oo wasiirka socdaalka ka noqday dalka Kanada
Axmed Xuseen, waa mudane ka tirsan baarlamaanka wadankaasi Kanada ayaa loo magacaabay wasiirka socdaalka, waana markii ugu horeeysay taariikhda inta la ogyahay uu qof soomaali ahi ka noqdo wasiir dal ka mid ah dalalka dunida galbeedka.
Isku shaandheeyn uu gollahiisa wasiirada ku sameeyey ra’iisal wasaaraha dalkaasi Justin Trudeau, ayaa lugu magacaabay Axmed Xuseen in xilkaasi loo dhiibayo. Axmed ayaa ah garyaqaan dhinaca sharciyada islamarkaasina ah muwaadin heeysta dhalashada Kanada. Sanadkii 2015-kii, ayuu wuxuu noqday mudane ka tirsan baarlamanka Kanada.
Talaabadan ayaa ku soo beegmeeysa maalmo ka dib markii toddobaadkii hore Ilhaan Cumar oo ah gabar soomaaliyeed noqoto mudane ka tirsan aqalka hoose ee dalka Mareykanka loo dhaariyey xubinnimadaas. Xilkan loo dhiibay Axmed Xuseen ayaa ah jaggo ay soomaali badan oo dalkaasi degan si weyni cabsi iyo walbahaar ugu heeystay dhaqankaasi. Waa guulo waa weyn oo mudooyinkii ugu dambeeyey ay soomaalida qurbaha ku talaabsatay. Waana arrin la amaaninsan yahay in wax ka badali doono magaca soomaalida oo ah noqday mid ciddii doonta ay siddii ay rabto u adeegsato.
Mareykanka oo ka digay in loo safro dalal ay Iswiidhan ka mid tahay